Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa: Fambolen-kazo indroa miantoana tao Ikalamavony – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa: Fambolen-kazo indroa miantoana tao Ikalamavony
Nanatanteraka Fambolen-kazo tany Ikalamavony ny avy eo anivon’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DIRMRS Fianarantsoa sy ny BCMM Fianarantsoa ny zoma 11 Martsa sy ny Sabotsy 12 Martsa lasa teo.
– Ny zoma 11 Martsa dia tao amin’ny Fokontany Amboditety izay ahitana ny loharano mamelona ny renivohitry ny Distrika Ikalamavony no nanatontosana izany ka zana-kazo 1200 eo no novolena.
Tonga nanotrona sy niara-nanatontosa izany ireo tompon’andraiki-panjakana ao Ikalamavony izay notarihan’ny Solombavambahoaka voafidy tao, ny Ben’ny Tanàna Ikalamavony sy Fitampito, ireo services Techniques rehetra toy ny Population, ny Santé, ny compagnie militaire 219 ny Compagnie de la Gendarmerie Ikalamavony, ny mpianatra avy am CISCO Ikalamavony, ireo fikambanana maro samihafa ary ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny harena ankibon’ny tany.
– Ny sabotsy 12 Martsa kosa dia tao amin’ny toeram-pitrandrahana Bevahondrano Fokontany Mananatana, CR Fitampito no nanohizana ny Fambolen-kazo. Zana-kazo 800 fototra no novolena.
Nialohavan’ny fandraisana ireo mpitondra fanjakana sy hetsika ara-kolotsaina nataon’ireo mpitrandraka madinika isam-poko ny fotoana ary nofaranana tamin’ny fizaràna nofon-kena mitam-pihavanana izay natolotry ny mpandraharaha.
Nankasitraka tanteraka ny hetsika izay nataon’ny avy eo anivon’ny DIRMRS sy BCMM Fianarantsoa ny Solombavambahoaka sy ireo tompon’andraikitra ao, ary nanentana ihany koa ny ho amin’ny fitandroana ny tontolo iainana.
Ireo zanakazo 2000 moa dia fanomezana avy amin’ny DREDD Matsiatra Ambony sy ny Cantonnement Ikalamavony izay ankasitrahana feno amin’ny fiaraha-miasa.
Fampitam-baovao sy sary : DIRMRS Fianarantsoa
← Fanombohana hetsika fambolen-kazo andiany fahatelo nokarakarain’ny Orinasa Labrador Madagascar
Akom-baovao DIRMRS Toamasina: Fambolen-kazo niarahana tamin’ireo mpandraharaha harena ankibon’ny tany →